Free Download Twixtor u Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Vision Raadka: Twixtor u Mac
Twixtor waa nooc ka mid ah software in dedejin kartaa ama hoos u dhigi heerka jir oo ka mid ah isku xigxigta, sanamyadii qorraxda ee video caqligiisu. Sidoo kale waa mid aad sax u ah iyo waxa ay u helida waxyaabaha dheeraad ah. Waxaa dunta fidsan karo iyo interpolate loox, habka wax isdhaafsan iyo waxa ay leedahay buuxda gacanta on jir ah.
Twixtor ka dhigaysa isku beddelka heerka jir ah u fududahay. Waxaa hoos u dhigi karaa, dadajiyaa ama bedeli heerka jir ah image isku xigxigta, aad si toos ah. In si kale loo dhigo, waxa kuu ogolaanayaa inaad si loo dardar, decelerate ama heerka jir badalo image isku xigxigta, si aad ula natiijada muuqaal cajiib ah. By warping oo ku daray looxyada xigxiga asalka, Twixtor daydaa jir cusub laga qabanin, si ay u la kulmi kartaa bartilmaameed u ah tayada loo arag image.
Waxoogaa sax ah
Bar ee qiimaynta mooshinka la sara kiciyaa. Twixtor waa mid aad sax oo u helida waxyaabaha dheeraad ah. Marka ay jiraan alaab gudbaya in goobta, waxa ay muujinaysaa artifacts yar. Tani waxay ka dhigan yar oo ciriiri iyo laaca oo alaab ah marka loo marayay ama ka baxday ku yiilleen.
Muddooyinka dunta fidsan iyo interpolate, habka wax isdhaafsan
Waxaa dunta fidsan karo iyo interpolate loox inay "dunta waqtiga" footage talooyin iyo habka isdhaafsan wax hab smart. By isticmaalaya hal dhimaya gargaarka bani-ka, waxa ay ku fidin karaan isku xigxiga. Intaa waxaa dheer, waxaa retime karaa buuxda gacanta on jir ah iyada oo sal jir.